ताजा अपडेट : देउवाको अग्रता जारी, २६ सय मतगणना गर्दा कसको कति मत ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
ताजा अपडेट : देउवाको अग्रता जारी, २६ सय मतगणना गर्दा कसको कति मत ?
नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा शेरबहादुर देउवाले अग्रता लिएका छन् । प्रारम्भिक मतमै अगाडि रहेका देउवाले प्रतिद्वन्द्वी डा शेखर कोइरालासँग अग्रता बढाउँदै लगेका हुन् । देउवा र शेखरको मतअन्तर दुई सय कटेको छ ।
२९६३ मतगणना गनिसक्दा देउवाले १७८८ मत प्राप्त गरेका छन् भने शेखर कोइरालाले ११५१ मत प्राप्त गरेका छन् । मतान्तर २९९ रहेको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना जारी छ ।
रातको १२ बजेपछि राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना सुरु भएको हो । सभापतिका लागि तीनवटा ट्यांकीमा मत खसालिएको थियो । ती तीनवटै ट्यांकी राष्ट्रिय सभागृहमा राखेर मतगणना भइरहेको छ । रातभरमा मतगणना सम्पन्न भइसक्ने आकलन गरिएको छ ।
अरु पदाधिकारी र सदस्यहरूको मतगणना भने कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा हुने बताइएको छ । यसका लागि सोमबार राति नै मतपेटिका सानेपा लगिएको थियो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ४५६२ मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यो पहिलो चरणको निर्वाचनमा खसेको मतभन्दा ११९ ले कम हो।